၁။ ဆရာ ကျွန်တော် လည်ပင်းနဲ့ ပခုံးမှာရှိတဲ့အဆစ်တွေ နာနေပါတယ်။ ဆေးအမြဲ လိမ်းပေမယ့် ခဏပဲ သက်သာပါတယ်။ ပခုံးနဲ့ လည်ပင်းဆုံရာ အဆစ်ကို ဖိပြီးပွတ်လိုက်ရင် ပခုံးက အကြောတွေမှာပါ လာပြီး ကျင်သလိုမျိုး ခံစားရပါတယ်။ ခေါင်းမော့ရင်လည်း ထောက်နေသလို ခံစားရပါတယ််။ ကျီးပေါင်းဖြစ်နိင်သလားဆိုတာရယ် ဘယ်လို နေထိုင် ကုသသင်တယ်ဆိုတာလေး ဆရာအချိန်ရရင် တင်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ၂။ ဆရာ ကျမအဖွါး လည်ပင်အရိုးကျီးပေါင်းတက်တာ ကုလို့ရပါလားရှင့်။ အရိုးကျီးပေါင်းတက်ခြင်း Spondylosis ဆိုတာ အရိုး-အဆစ်တွေ အနိစ္စဖြစ်စဉ်သဘော ပြောင်းလဲ-ပျက်ယွင်း လာတာမျိုးပါ။ ဖြစ်တာကတော့ အဆစ်ပေမဲ့ သူ့အနားက အာရုံကြောတွေကို ဖိမိရင် ပိုပြီး ဒုက္ခပေးတယ်။ အာရုံကြော ဆိုတာက နာတာကို သိတာနဲ့ လှုတ်ရှားမှု ဆောင်ရွက်တာဆိုပြီး အနည်းဆုံး ၂ မျိုးရှိတာမို့ ဒဏ်ခံရတဲ့ အာရုံကြော အမျိုးအစားလိုက်ပြီး၊ ရောဂါလက္ခဏာတွေ ဖြစ်လာစေတယ်။ နာတာ-ကျင်တာ၊ ကောင်းကောင်း မလှုတ်ရှားနိုင်တာ မျိုးတွေပါ။ ညအိပ်တုံး ခေါင်းအုံး အနေအထား မမှန်လို့၊ ဖြစ်တာကလည်း ဒါမျိုးအသေးစားဘဲ။ “အုံးလွဲတယ်” ခေါ်တာ မျိုးပေါ့။ ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်း သိပ်တိတိကျကျ မသိရင် သီအိုရီတွေ များနေတတ်တာတွေထဲ ဒီရောဂါလည်း ပါတယ်။ ကျောရိုးလ
တဆယ်ဘဲ တပြားမှမရှော့ဘူး။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၁-၁၂-၂၀၁၉
December Days ထွက်ပြေးရတာ ဒီဇင်္ဘာ
၁၉၉၀ တုန်းက ဒီရက်တွေမှာ စစ်အစိုးရဖမ်းတာမခံရအောင် ရှောင်တိမ်းနေရချိန်ပါ။ လာဖမ်းတဲ့ညမှာ ညစာကို ပြီးအောင် မစားခဲ့ရပါ။ အေးလှချမ်းလှပေမယ့် ချွေးပြန်အောင်ပုန်းရှောင်ခဲ့ရတယ်။ ခဲလောက်အောင်အေးလှတဲ့ ချင်းတောင်တန်းပေါ်က ရေစီးတွေထဲမှာ ခြေဗလာနင်းရတယ်။ စိုထိုင်းနေတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာ အိပ်စက်ခဲ့ရတယ်။ ၆ ရက်နဲ့ ၅ ညတာဖြတ်သန်းအပြီး သူများတိုင်းပြည်မှာ ခိုလှုံလိုက်ရတာ အခုထိပါ။ အကာအကွယ်ပေးခဲ့ကြသူတွေ၊ နေစရာ၊ အိပ်စရာ၊ စားသောက်စရာ၊ သွားလာစရာမှန်သမျှ လိုလေသေးမရှိရ ဖြည့်ဆည်းပေးကြသူတွေ၊ အဆုံးအမစကား လာရောက်မြွက်ကြားပေးကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ သတင်းဆက်သွယ်ရေး၊ လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်ပေးသူတွေ၊ ကူညီပါမယ်လို့ ကမ်းလှမ်းကြသူတွေကို မမေ့ပါ။ သူတို့နာမည်တွေဟာ ဘယ်သောအခါမှ ကိုယ်ပိုင်ဒိုင်ယာရီထဲကအစ သမိုင်းစာမျက်နှာတွေပေါ် တင်မှာမဟုတ်ပါ။ လူသာဆွေးတယ် အမှုကမဆွေးလို့ ဇနီးကမကြာမကြာသတိပေးလို့ပါ။ စိတ်ထဲကနေသာ ဆုတောင်းပေးရတယ်။ အဲဒီကတည်းက ဒီဇင်္ဘာလဟာ ကျွန်တော့်ဘဝမှာ ပုန်းရှောင်ထွက်ပြေးရတဲ့လလို့သာ သတ်မှတ်ထားလိုက်တော့တယ်။ ဒီဇင်္ဘာသည် အေးလှ၏။ ဘေးတွေ့ခဲ့ရ၏။ ပြေးခဲ့ရ၏။ ဝေးခဲ့ရ၏။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၁-၁၂-၂၀၁၆
ပဋ္ဌာန်းကို ပဌာန်းလို့ ပြင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပြင်ပေးသူ မှားတယ်။ ပဌာန်းက မှန်တယ်။ ဌာ ကမ္မဌာန်း ကိုယ်သဏ္ဌာန် ကျန်းမာရေးဌာန ဌာနချုပ် ဌာနစိတ် ဌာနပိုင်မင်း ဌာနမှူး ဌာနီ ဌာနန္တရ ဌာပနာ (ပါဠိ = ဌပန = ထားခြင်း) ဌာပနာတိုက် ဌီ (ဥပါဒ်၊ ဌီ၊ ဘင်) ပဌမ (ပါဠိ) = တခုမြောက် ပဌာန်းပါဠိ ပထမ = (သကတ္တ ခေါ် သင်္သသကြိုက် ခေါ် ဆန်းစ်ခရင် ခေါ် သင်္သကရိုက်) = တခုမြောက် မိုးလေဝဿဌာန (ယခင်သုံး) ရာထူးဌာနန္တရ ဝတ်ဌနာ သူဌေးသူကြွယ်။ နေရာဌာန ဋ္ဌ ကုဋ္ဌနူနာ ဆဋ္ဌမ ဒိဋ္ဌ အဋ္ဌကထာ အဋ္ဌမ အဋ္ဌာရသအတတ် ဥက္ကဋ္ဌ ရွှေမုဋ္ဌော ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ပဋ္ဌာန်း ပဌာန်း မဟုတ်ဘဲ ဘာလို့ ပဋ္ဌာန်းဖြစ်ရသလဲ။ သက္ကတဘာသာ =၊ ပြ + သ္တာန ကနေဆင်းသက်တယ်။ အဆင့်ပါတဲ့ပုဒ်တွေကို ထိပ်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘဲ နောက်ကထားတဲ့အခါ ပါဠိဘာသာ အဆင့်ပြန်ထည့်ရတယ်။ ဌာန လို့ တခုတည်းပုဒ်မျိုးမှာ သံယုဂ်မပါပေမယ့် ပဋ္ဌာန လိုပုဒ်မှာတော့ ပါရတယ်။ ဒုဋ္ဌာန၊ နိဋ္ဌာန တို့မှာပါတာကျတော့ နောက်အချက်ရှိသေးတယ်။ ဒုရ်၊ နိရ် တို့မှာ ပါတဲ့ ရ်ရဲ့အရှိန်ကြောင့် နောက်ပါတဲ့ပုဒ်တွေကို သံယုဂ်ပြုရတာပါ ပါတယ်။ သံယုဂ်မြဲတာပေါ့။ သံ +ဌာန ကျတော့ သဏ္ဌာန လို့သာဖြစ်တယ်။ ပါဠိမှာ သံယုဂ်၃ဆင့်အစား ၂ဆင့်သာ ရှိလေ့တယ်။ ပဋ္ဌာန ရှေ့မှာ အ
ကင်ဆာအုပ်စုမှာ အခုပဲ တွေ့တာ။ ၁။ အသည်းအထူးကုဆရာဝန်ကြီး တဦးဦးနဲ့ ၂။ တခုလောက်သိချင်လို့ပါရှင် ၃။ တပတ် ၂ရက် ၃ရက်လောက်တိုက်ဖြစ်နေပါတယ် ၄။ ခြေ​ထောက်​တွေကိုက်​နေတာ တအားပဲ ၅။ CT scan သည် ၃ ဖက်မြင် X-ray အမျိုးအစားတခုဖြစ်သည်။ တဝမ်းပူကင်ဆာ ပျောက်တော့မည်လော။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
Roadside Water လမ်းဘေး ရေအိုးစင်
တနေ့က ရေးရသေးတယ်။ ရေကို မတ်တတ်မသောက်ရခြင်းအကြောင်းဆိုတာကို သဘောကျနေကြတာ တွေ့လို့။ မတ်တတ်သတ်ပုံလည်း မှန်တာမတွေ့။ မှားရေးတာတွေဆို လိုက်ခ်တွေ ရှယ်တွေက များတယ်။ ဖာတလုံးခေါင်းကြား ဇာတ်ကားထဲမှာ မင်းသားရော သူတောင်းစားပါ မတ်တတ်ရပ် ရေသောက်ကြတယ်။ လမ်းဘေးရေအိုးစင် ကုသိုလ်ပြုသူတွေ အနားမှာ ဆိက်တီကုလားထိုင်ပါ ထားပေးရမလို။ ကျန်းမာရေးအကြောင်းစာတွေကို ဖတ်ကြလားတော့ မသိ၊ အကျိုးရှိတယ်လို့ ပြန်ပြောဖေါ်ရသူက နည်းနည်းလေးသာရှိတယ်လို့ စဉ်းစားမိလေ့ရှိပါတယ်။ ပြီးမှ ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်။ လမ်းဘေးရေအိုးစင်မှာ၊ ကျေးဇူတင်လွှာရေးစရာ ဝှိုက်ဘုတ်မရှိပါ။ ငါဆိုတဲ့ကောင် ဘာမျှော်နေတယ်မသိ၊ အတော်ညံ့ပါဘိ။ ကျွန်တော့်ရေအိုးစင်မှာ တခါတခါ ခွက်ပျောက်တယ်။ ရေအိုးစင်မှာ ရေလည်းဖြည့်၊ ခွက်လည်း ဖြည့်ပါတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
အရင်က အတိုကောက်တွေ ရေးခဲ့ကြတယ်။ (င်) = မောင်။ (သှ်) = သည်။ (မြောံ) = မြောက်။ (၁ိ) = ၁ ကျပ် = တကျပ်။ (၁ါး) = ၁ ပြား = တပြား။ (၁ဲ) = ၁ ပဲ = တပဲ။ သချင်္ာမှာလည်း ထို့ကြောင့်၊ အဘယ့်ကြောင့် သင်္ကေတွေသုံးတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ဦးဝန် နှင့် ဦးဘ ရေးသည် https://www.facebook.com/photo/?fbid=4568511606602793&set=pcb.4568514876602466 ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ဖိုးသာထူး ဖိုးသာထူး၊ အလွန်ဝတဲ့ဖိုးသာထူး၊ ဖိုးသာထူး ဝမ်းပူပူ၊ ဖိုးဝကြီးနဲ့တူ၊ တူပါသကွဲ့ မယုံငြား၊ သည်မှာ ကြည့်ပါလား။ တချို့က ဖိုးသာထူးဝမ်းပူပူ ဖိုးဝရုပ်နဲ့တူလို့ မှားရေးနေကြတယ်။ ဒီကဗျာကို ဒေါက်တာမောင်ဖြူးက ရေးတယ်လို့ တက္ကသိုလ်မောင်မောင်ကြီးက အသုံးချမြန်မာစာပေ ဆောင်းပါးများ၊ ၁၉၇၀ ဒီဇင်ဘာလထုတ်မှာ ရေးထားပါတယ်။ ဒေါက်တာ တန်ဂွမ်လျောင်လို့လည်း ခေါ်တယ်။ မရွှေဖဲ နဲ့ မောင်ရခဲကိုလည်း ဒေါက်တာမောင်ဖြူးကပဲ ရေးခဲ့တယ်။ ကန်တော်တပတ် ခရီးထပ်လို့ ရေးတယ်။ စက္ကူတကျပ် ငွေတမတ်လို့ ရေးတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
အိမ်ခေါင်စွန်းဆီက လွမ်းလှအောင် တအာအာနှင့် မောင်နက်ပြာ ကိုရွှေကျီးကိုလ ကျေးဇူးကြီး တင်မိပါ။ အုံတအုံ မှုန်တမှုန့်ရယ်နှင့် မိုးလုံ့မကြည်လင့်တဲ့ပြင် လေညင်ညင်ဆို မပြောသာဘု ဟောဟိုဆီ ပညောင်ပင်ဖြင့် ရုပ်ပုံပင် ဘယ်မငြင်းနိုင်ဘု ဓာတ်လောကာ မိုက်မလင်းမှာလ သီချင်း သံချိုချိုနှင့် ရွှေနှုတ်ကို အသာဖွင့်ကာပ ကြွေးရင့်ကာ သာသာကျူတော့ ကြားရသူ ဘယ်ကိုလွမ်းရပါ့ ရွှမ်းပီတိဖြာ။ တို့သူငါ စက်ကာလျောင်းပါတဲ့ ခေါင်းရင်းဆီ အိမ်ခေါင်စွန်းဆီက ခွန်းဆင့်ကာ ချိုချိုမြည်တော့ လာလိမ့်မည် ဧည့်သည်ကလေးဟာဖြင့် နဂိုမူ လူယဉ်အေးရယ်လို့ တွေးကာပါ့ မောင့်ဝမ်းသာ ထင်ပါငဲ့ စိတ်ထဲ။ လာစေတော့ကွယ် စားသောက်ရန် အလှယ်လှယ်နှင့် အသွယ်သွယ် စီမံသကာဖြင့် မောင်ဧည့်သည် လာချိန်ဆပါလို့ ဗလဝ ခြွေသဒ္ဓါနှင့် နေအခါ ရောင်ခြည်ယွန်းစေတော့ စေတနာ ပြောင်ကြည်ရွှန်းရယ်နှင့် ကွန်းထောက်မှာပဲ။ ။ (ဇော်ဂျီ) ဂန္ထလောက၊ အတွဲ ၁၄၊ အမှတ် ၈၄၊ ဇန်နဝါရီ ၁၉၃၂။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
Multi-billion EU bid to challenge Chinese influence အီးယူကနေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်မယ်
တရုပ်ကို ချဲလင့်လုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ ကနေ့သတင်းကဆိုပါတယ်။ တိတိကျကျဆိုရင် တရုပ်ရဲ့ မဟာစီမံကိန်းကြီး ဖြစ်တဲ့ Belt and Road Initiative ခေါ်ခါးပတ်လမ်းမကြီး။ ဒစ်ဂျစ်တယ်၊ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ အင်နာဂျီကဏ္ဍတွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်။ အီးယူရဲ့အရင် တရုပ်က အာဖရိကနဲ့ နေရာတိုင်းမှာ လုပ်ထားပြီးသား။ အီးယူဥက္ကဌ Ursula von der Leyen အူလီဆာက Global Gateway Initiative လို့ အမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ၁၄ မျက်နှာပါ ဒေါ့ကူးမင့်တခု ထွက်လာတယ်။ တရုပ်ရဲ့ မဟာစီမံကန်းဟာ လမ်းသစ်တွေ၊ တံတားသစ်တွေနဲ့ ဆိပ်ကမ်းသစ်တွေပါတယ်။ တရုပ်လက်တံရှည်ဟာ အင်ဒို-ပစိဖိတ်ကနေ ဥရောပအနားက ဘော်လကန်ဒေသအထိရောက်တယ်။ တရုပ်လုပ်နည်းကြောင့် predatory loans ချေးယူငွေတွေများပြီး တချို့နိုင်ငံငယ်တွေ debt-trap diplomacy အကြွေးထောင်ခြောက်ထဲ ရောက်ကုန်ကြတယ်။ တရုပ်အတွက်သာ အကျိုးများတဲ့နည်းဖြစ်တယ်။ ကြာတော့ အနောက်အုပ်စုနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့လာတယ်။ အီးယူကကော တရုပ်ကို ချဲလင့်လုပ်နိုင်ပါ့မလား။ ယူအက်စ်နဲ့ အီးယူလက်တွဲကြလိမ့်မယ်။ တရုပ်နဲ့ မတူတာက အီးယူက transparent ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့ values-based တန်ဖိုးထားမှုကို အခြေပြုတယ်။ Chinese RBI infrastructure
How worried should we be about Omicron
How worried should we be about Omicron, the new coronavirus variant? Updated 7:23 PM ET, Tue November 30, 2021 (CNN)Since South African authorities announced the arrival ofanew coronavirus variant that contains an unusually large number of mutations, countries around the world have mobilized by putting into place travel restrictions and precautionary measures. There is much that's still unknown about this variant, Omicron. While scientists are gathering more information, the public wants to know how worried they should be. Is the alarm around Omicron warranted? What's already known, and what are the key pieces of information still to be researched? Are there things we can do to prepare for it? I discussed all of this with our expert, CNN Medical Analyst Dr. Leana Wen, who is an emergency physician and professor of health policy and management at the George Washington University Milken Institute School of Public Health. She is also author ofanew book, "Lifelines: A Doct
ကဗျာက စေ့ဆော်သော အခြေအနေနှင့် စပ်လှဉ်း၍အောက်ပါသဓကကို တင်ပြပါသည်။ တောင်တောရယ်သာ၊ မာလာကငုံဖူး။ တပင်ကို နှစ်ပင်ယှက်တယ်၊ ကျေးငှက်ကမြူး။ အထက်ပါသာဓကတွင် ကဗျာဆရာသည် သူ၏ခံစားမှုကို မဖော်ပြပေ။ ရှုခင်းတကွက်ကိုသာ ဖော်ပြပါသည်။ သို့သော် ကဗျာကိုဖတ်ရသူဝယ် ခံစားမှုသည် ပေါ်လာပါသည်။ ဤသို့ ခံစားမှုပေါ်လာခြင်းကို ကဗျာက စေ့ဆော်သော စိတ်အခြေအနေဟု ဆိုပါသည်။ တက္ကသိုလ် မောင်မောင်ကြီး အသုံးချမြန်မာစာပေ ဆောင်းပါးများ ၁၉၇၀ ဒီဇင်ဘာလထုတ် ခုခေတ် တစ်ကသိုလ်တွေကတော့ တပင်ကို တပင်လို့ မရေး၊ တကွက်ကို တကွက်လို့ မရေးတတ်ကြပါ။ စာပေဆုချီးမြှင့်သူတွေနဲ့ ချီးမြှင့်ခံရသူတွေကလည်း တပင်ကို တပင်လို့ မရေး၊ တကွက်ကို တကွက်လို့ မရေးတတ်ကြပါ။ အဲလိုမရေးတဲ့စာအုပ်တွေက ရောင်းကောင်းတယ်။ စျေးကွက်မြူး။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ဆရာတော်‌မှ မိမိသက်သာသလို အရိယာပုဒ်ဖြင့် ထိုင်ခွင့်ပြုသောအခါ သတ်ပုံ မှားနေတယ်။ ဣရိယာပုထ် လို့ ရေးရတယ်။ ဣရိယာ = ရွေ့ခြင်း။ အမူအယား။ အနေအထိုင်။ ဣရိယာပထ =ကိုယ်အမူအရာဖြစ်ကြောင်း။ ဣရိယာပထ လေးပါး ၁။ ဂမန သွားခြင်း၊ ၂။ ဌာန ရပ်ခြင်း၊ ၃။ အာသန ထိုင်ခြင်း၊ ၄။ သယန လျောင်းခြင်း အဲဒါနဲ့ဆိုင်တဲ့ပုံကို လာမတင်ပါရန်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ဝေလီဝေလင်း အချိန်။ အုန်းတောကြီး အထဲမှ တွန်မြည်လိုက်သော ဥသြသံကလေးသည် မနိုးတ၀က် နိုးတ၀က်နှင့် မှိန်းစက်နေသော ရွာကလေး၏နားသောတအား ငြိမ့်စေလေ၏။ အနက်မထင်သော အသံဖြစ်၍ ငြိမ့်စေခြင်းထက် ပိုမိုမစွမ်းဆောင်နိုင်ချေ။ ဥသြသံကလေး ရပ်စဲသွားသည်နှင့် တပြိုင်နက် ရွာထိပ်ဆီမှ ပေါ်ပေါက်လာသော တေးသံသည်ကား ရွာကလေး၏ နားသောတကို ငြိမ့်စေရုံမျှမက စိတ်နှလုံးကိုလည်း စိမ့်စေလေ၏။ လွမ်းသော ဆွေးသော အောက်မေ့တသသော အဓိပ္ပာယ်တို့ စုဝေးရာ တေးသံတေးသွားဖြစ်လေသည်။ ဤတေးသံကလေးကို ကြားရသောခဏ၌ မှိန်းနေသော ရွာကလေးကို လူးလွန့်လာသည်ဟု ထင်မိတော့၏။ တေးပိုင်ရှင်သည် ဟိုဟိုဘ၀များက ခွဲခွာခဲ့ရသော ချစ်သူအား ရော်ရမ်းတမ်းတလျက် အားရပါးရ သီဆိုလိုက်လေရော့လားဟု ကြားရသူတို့၏စိတ်တွင် ထင်မိလေတော့၏။ တရွာလုံးက ဂရုစိုက် နားစွင့်နေသော်လည်း တေးပိုင်ရှင်သည် မည်သူ့ကိုမျှ သတိထားမိပုံမရ။ ဆက်လက် သီဆိုသွား၍ ရွာလယ်ရပ် ၅ ရက် စျေးကလေးဆီကျမှ အရပ် ၉ မျက်နှာတွင် ပျံ့နှံ့နေသော မိမိ၏တေးသံကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်လေ၏။ စျေးနေ့ နံနက်တိုင်း ဤတေးသံကို ကြားရသည်မှာ ယခုအကြိမ်ပါနှင့် သုံးကြိမ်ရှိလေပြီ။ တေးပိုင်ရှင်ကား အခြားမဟုတ်၊ ရွာအရှေ့နွားတထွန်လောက်တွင်ရှိသော ဇီးပင်ကုန်း၌ ဥယျာဉ်လုပ
ကလေးကဗျာကြည့်စာ၊ စီစဉ်သူ - ဦးဘ U Ba's Nursery Rhymes, Burmese အတွင်းသရုပ်ဖော် - ဦးဘဉာဏ်၊ ဦးဘကြည် ထုတ်ဝေသူ - မက်မီလန်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ ကလကတ္တား ထုတ်ဝေသည့်နှစ် - 1950? စာအုပ်အရွယ် - 18 cm x 12.5 cm စာမျက်နှာ - ၃၆ မျက်နှာ https://www.facebook.com/shwethwayjournal/photos/pcb.244898502582964/244897015916446/ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
သားချော့ သီချင်း ဖတ်စာ
ကစားနည်းဖြင့် ပညာပေးစာစဉ် ပထမတန်း ဒေါက်တာ တန်ဂွမ်လျောင် https://www.facebook.com/shwethwayjournal/photos/pcb.1117524321987040/1117519381987534/ ဖါးပါရင် တကောင်ပေးပ။ (တစ်ကောင် မဟုတ်) အိပ်ချင်ပြီကွဲ့ စပယ်ကုံး (စံပယ်ကုံး မဟုတ်) နွေဦးပေါက်မှာ မြိုင်တကြော (တစ်ကြော မဟုတ်) ဟီးလေးပေါက်ပင် ကစွန်းပင် (ကန်စွန်းပင် မဟုတ်) မိုးပေါ်မှာ ကြယ်တလုံး (ကြယ်တစ်လုံး မဟုတ်) ဆေးတံတိုနဲ့ တငေါ့ငေါ့ (တစ်ငေါ့ငေါ့ မဟုတ်) ခွေးမြီးကောက်တဲ့ တကောင်နှစ်ကောင် (တစ်ကောင် မဟုတ်) ကြက်ဖတညင် တောကိုဝင် (တစ်ညင် မဟုတ်) တအိတ်က သခင်ဖို့၊ တအိတ်က သခင်မ၊ ကျန်တအိတ်ကိုမျှ (တစ်အိတ် မဟုတ်) ခြေတဖက်ချီ ခြေတဖက်ချ (တစ်ဖက် မဟုတ်) ကိုး တဆယ် ကြ်မကြီးကိုဝယ် (တစ်ဆယ် မဟုတ်) ချိုးနှစ်ကောင်နဲ့ ကြွက်တကောင် (တစ်ကောင် မဟုတ်) ကြွယ်ဝသော လူတဦးရှိသည် (တစ်ဦး မဟုတ်) ဝတ်တရိန်း မြည်တာနွား (ဝတ်တစ်ရိန်း မဟုတ်) တကိုယ်တည်း ဖိုထိုးပါလို့ကွယ် (တစ်ကို်တည်း မဟုတ်) ဗူးသီးတွေသာ နာရီဆိုက (ဘူးသီး မဟုတ်) တလုံးခူး၍ ငါဆင်လိုလှ (တစ်လုံး မဟုတ်) တကိုယ်တည်း သီချင်းဆိုလို့ကွယ် (တစ်ကိုယ်တည်း မဟုတ်) နောက်တနေ့မှ လာခဲ့ပါ (တစ်နေ့ မဟုတ်) ဒေါက်တာ တန်ဂွမ်လျောင်ကို ဒေါက်တာမောင်ဖြူးလို့လည်
တင်နေကြတာ မှန်တာ ရှားတယ်။ မူရင်းကဗျာမှာ ပန်းပန်လျက်ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းပန်လျက်ပဲ မဟုတ်ပါ။ ကွန်မင့်တခုရတယ်။ အဲဒါ လွယ်လွယ်လေးပါ မ နောက်က ဘဲ လိုက်တယ်လို့ မှတ်လိုက်ရင် ရပါပြီဆရာ တဲ့။ မြန်မာစာမှာ ဖေါ်မြူလာတွေ နေရာ တိုင်းမှာ မမှန်ကြောင်း မကြာခဏ အထောက်အထားတွေနဲ့ တင်ပြထားတယ်။ ဗေဒါလမ်းကဗျာ (မူရင်း) ညိုပြာပြာ လတာပြင်ခြေရင်း လှိုင်းတက်ရာ ဗေဒါတက်၊ လှိုင်းသက်ရာဆင်း။ ဆင်းရလဲ မသက်သာ အုန်းလက်ကြွေရေပေါလော၊ မျောစုန်လို့လာ အဆင်းနဲ့အလာ၊ ဗေဒါမ အထွေး အုန်းလက်ကြွေ သူ့နံဘေး၊ ဆောင့်ခဲ့ရသေး။ ဆောင့်ခဲ့လဲ မသက်သာ နောက်တချီ ဒီတလုံးက၊ ဖုံးလိုက်ပြန်ပါ မြုပ််လေပေါ့ ပေါ်မလာ၊ မဗေဒါအလှ တလံကွာ လှိုင်းအကြွ၊ ပေါ်လိုက်ပြန်ရ။ ပေါ်ပြန်လဲ မသက်သာ ချောင်းအဆွယ် မြောင်းငယ်ထဲက၊ ဘဲထွက်လို့လာ ဘဲအုပ်မှာ တရာနှစ်ရာ၊ ဗေဒါက တပင်ထဲ အယက်အကန်ခံလို့ ဗေဒါပျံအံကိုခဲ၊ ပန်းပန်လျက်ဘဲ။ ။ (ဇော်ဂျီ) ဆရာဇော်ဂျီက တတွေကို မလိုအပ်ပဲ စမသတ်ပါ။ ဗေဒါပျံအံကိုခဲ ပန်းပန်လျက်ပဲလို့ မရေးပါ။ စာအုပ်နာမည်လေး သိပါရစေ ဆရာ အကိုးအကားစာအုပ်တွေ မနည်းတော့ ဘယ်ထဲကလဲ ပြန်ရှာနေတာ အချိန်က နည်းနေးသေးလို့။ တအုပ်တော့တွေ့ပြီ။ မြဇင်ရေးတဲ့ ကဗျာ့ နရီ နှင့် နိမိတ်ပုံစာအုပ်ထဲက။ ၁၉၇၃ ခုန
သတ်ပုံမှန်အတိုင်း တင်ရကောင်းမှန်းသိသူ အတော်ရှားတဲ့ခေတ်မှာ ဒီစာက မူးရင်းသတ်ပုံမှန်အတိုင်းသာ တင်ပြထားတယ်။ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း။ ထီးကလေးနဲ့ မနီ - တင်မိုး ပန်းချီ ပေါ်ဦးသက် ၁၉၇၂၊ ဒုတိယအကြိမ် ၁၈ x ၁၁ စင်တီမီတာ၊ စာမျက်နှာ ၁၁၂ မျက်နှာ ထီးကလေးနဲ့မနီ (တင်မိုး) https://www.facebook.com/shwethwayjournal/photos/pcb.1117532768652862/1117530048653134/ ထီးကလေးနဲ့မနီ မနီကလေး မူမူရာရာ ထီးကလေးနဲ့လာ လာပါလေရော့ လာပါတော့ ဆရာခေါ်ပါပေါ့။ တမော့မော့နဲ့ စာပေအံ သူ့တေးစာစာညံ။ ဆရာ့ထံ စာအံရ မနီ ပထမ။ ပန်းသဘင် ကဗျာ မိုးတွေလေတွေ တခြိမ်းခြိမ်း (တစ်ခြိမ်းခြိမ်း မဟုတ်) လက်ကျန်တဖူး (တစ်ဖူး မဟုတ်) မနီလာပါ့ လသာည လမ်းမဖြူးဖြူး ပန်းကဖူး မနီ ပန်းတွေခူး။ တဖူးကိုတော့ ဘုရားထံ တဖူး မေမေပန်။ လက်ကျန်တဖူး လိုချင်က မနီထံကိုလာပါကြ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
မောင်ငိုမယ်မိုးသဲသဲမှာကွယ် သီချင်းတဆယ် မြန်မာပြည်တခုထဲအတွက် တာဝန်ယူ ဖြန့်ချိသည်။ ခွန်နစ်က အသံထွက်အရရေးတာဖြစ်။ သတ်ပုံအရ (၇) ခုနစ်လို့ရေးရ။ ကနေ့မနက် ခုနစ်ကို မှားတဲ့မေးခွန်း ၂ ခုလာတယ်။ အတ္ထုပ္ပတ္တိ မှားကြတယ်။ တဆယ် မှားကြတယ်။ တခုထဲ မှားကြတယ်။ ဖြန့်ချိ မှားကြတယ်။ ပုံပို့ပေးသူ ကျေးဇူး။ ကျွန်တော် နားယဉ်ခဲ့တာကတော့ ကိုကျော့မှူးသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
တင်ထားတာတခုတွေ့တယ်။ ရေးဦးမယ်။ အမျိုးသမီးအဆိုတော်တွေအမည်တွေရှေ့မှာ (ဒေါ်) တပ်ထားတယ်။ အဆိုဒေါ်တွေ။ ဗိမ္မသာရ မရှိ။ ဗိမ္ဗိသာရလို့ ရေးရတယ်။ မောင့်အချစ်မြှားဆူး မဟုတ်။ မောင့်အချစ်မြားစူး။ တောင်တန်းပြာနဲ့ကျောပိုးအိပ် မဟုတ် တောင်တန်းပြာနဲ့ကျောပိုးအိတ်။ ကံ့ကော်တော်မျိုးအောင်ဖြစ်နေတယ်။ တောနဲ့ တော် အတော်ကို မတူပါ။ တစ်ကျော့နှစ်ကျော့တေးကိုသီ မရှိပါ။ တကျော့နှစ်ကျော့တေးကိုသီ သီချင်းနဲ့ ရုပ်ရှင်ရှိတယ်။ တကြော့နှစ်ကြော့တေးကိုသီ ကဗျာရှိတယ်။ သီချင်းတွေ နားထောင်ကောင်းပေမဲ့ သီချင်းစာသား သတ်ပုံမှန်တာ ၁၀% လောက်သာရှိတယ်။ စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာတွေ ဟောတာပြောတာ ကောင်းပေမဲ့ သတ်ပုံမှန်နဲ့ရေးတတ်သူ ၁၀% လောက်သာရှိတယ်။ တခြားနေရာတွေမှာ တွေ့တယ်။ ဂီတလုလင်သာရှိ။ ဂီတအဖိုးအို မရှိ။ တစ်မာလမ်းကို ပြန်ခဲ့ပါမရှိ။ တစ်ကသိုလ်ကျောင်းသူတစ်ဦး မရှိ။ သတိယနေတယ်သူငယ်ချင်းရေ မရှိ။ ယဉ်တစ်ကိုယ်မယ် မရှိ။ အောင်ချင်းရှစ်ပါး မရှိ။ တစ်ဆောင်းသစ်ပြန်ပြီ မရှိ။ ကျွန်တော်က တေးဂီတကို မသိပါ။ စာအရေးအသားသာ နည်းနည်းသိတယ်။ ဆောရီး။ မြရင်တို့ရွာကို ဒေါ်မြရင်တို့ရွာလို့ မဆိုရ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
Medicines ဆေးသောက်နည်း (၂)
ဆရာမင်္ဂလာပါ ကျွန်မတို့ တွေ မေးခွန်းတခုကို ငြင်းခုံနေရပါတယ် အင်္ဂလိပ်ဆေးနဲ့ မြန်မာဆေးတွဲသောက်လို့ မရဘူးလို့ ငယ်ငယ်တည်းက အသိစွဲနေရင်း ဟိုတရက်က ရုံးက မောင်လေးတယောက်က အဲ့ကိစ္စကို သူ့ဆရာဝန် အသိတယောက်က အင်္ဂလိပ်ဆေးမြန်မာဆေးတွဲသောက်လို့ ရတယ်လို့ဖြေတယ်ပြောပါ ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားလို့ပါ ဆရာ။ လေးစားစွာ မေးမြန်းပါတယ်ဆရာ။ အဲ့အကြောင်းလေး အသိပညာ ဝေမျှပေးပါရှင်။ အင်္ဂလိပ်ဆေး ခေါ် ဆရာဝန်တွေသုံးတဲ့ဆေးပေါင်း သိတ်သောင်းရှိ။ မြန်မာဆေးတွေလည်း ထောင်သောင်းရှိ။ တချို့က တမျိုးတည်းသာသုံးကြ။ ဆရာဝန်တွေလည်း တချို့က လျှက်ဆားရက်လေ့ရှိ။ တခါတခါ ပရုပ်ဆီသုံးကြ။ တခါတခါ ကွမ်းရွက်စား။ လေးညှင်းငုံ။ ဆေးသုတေသနမရှိတာကို ဆရာဝန်တွေက မသုံးကြ။ Multivitamins အားဆေးများသောက်နည်း https://dr-tint-swe.blogspot.com/2021/08/multivitamins.html Medicines to take with or without food ဆေးသောက်တာ အစာနဲ့ နီးမလား ဝေးမလား https://dr-tint-swe.blogspot.com/2021/08/medicines-to-take-with-or-without-food.html Alternative Medicine ဘိုဆေးနဲ့ ဗမာဆေး https://dr-tint-swe.blogspot.com/2021/07/alternative-medicine.html Cancer and Herbal Medicine ကင်ဆာနှင့် ဟာဗယ်
၇ နှစ်တိတိကဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အတူနေခဲ့ကြပြီး၊ ဒီနိုင်ငံ တခြားပြည်နယ်မှာ ရောက်နေနှင့်ကြတဲ့ သားအမိတို့ အိမ်အထိ လာလည်ကြတယ်။ ကျန်းမာစွာတွေ့ရလို့ ဝမ်းသာကြရတယ်။ ပုံထဲက မိခင်ဖြစ်သူဟာ ယူအက်စ်အေကို မလာခင်၊ နယူးဒေလီမှာ ရဖျူဂျီ ခေါ် ဒုက္ခသည်ဘဝနဲ့ ရင်သားကင်ဆာကို အောင်မြင်စွာ စနစ်တကျ ကုသခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၃၀-၁၁-၂၀၁၄ ၃၀-၁၁-၂၀၂၁
ဖရင်းအရင်းတယောက်က ကြူကြူမွှေးရေကျိုငါးပိပုံ တင်တာတွေ့လို့ ထပ်တင်ပါရစေ။ အရင်က ကွန်မင့်တခုရလို့ ရေးထာတာ။ ကျမတို့တော့ ငါးပိမရှိတာနဲ့ကို အမေရိကားမှာ နေနိုင်မယ်မထင်ဘူးဆရာတဲ့။ ယူအက်စ်အေမှာ ငပိ၊ ငန်ပြာရေကောင်းတာတွေ ပေါတယ်။ ငါးခြောက်သာ မှာယူရတယ်။ နောက်ကွန်မင့်တခုလည်းလာတယ်။ တနေ့တွင် ဦးဖိုးမြသည် မြေးငယ်မောင်လှိုင်နှင့်အတူ လှန်းထားသော ငခြောက်များကို စောင့်ရင်းနေခဲ့လေ၏လို့ ရေးတဲ့စာမှာ တချို့သတ်ပုံတွေကို ကျွန်တော်က ထောက်ပြလို့ လာတာ။ ပြန်လာတယ်။ ငခြောက်ကို ထည့်မပြောပုံထောက်ရင် ငါးကနေဖြစ်လာတဲ့ ငါးခြောက်ဆိုတာကို ဆရာလက်ခံတယ် ထင်ပါရဲ့။ သဘာဝလည်းကျတယ်၊ ယုတ္တိလည်းတန်တယ်။ ဖြစ်နိုင်က ဆရာ့အမြင်သိလို တဲ့။ အစည်းအဝေးမှာ ဦးနေဝင်းခန့်တဲ့ မြန်မာစာအဖွဲ့ကနေ ငပိကို ငါးပိလုပ်ထားတယ်။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ (၃) မှာ ငဝဲရောင်၊ ငဝက်၊ ငသလဲထိုး၊ ငသလောက်၊ ငသိုင်း၊ ငသိုင်းချောင်းမြို့လို့ ရေးပါတယ်။ ရေကျိုငပိမှာ အရည်ကျို၍စားရသော ငပိမျိုးဖြစ်သည်လို့ ရေးပါတယ်။ အချို့ကလည်း ချေချိုငပိဟု ခေါ်ကြသည်လို့ ရေးပါတယ်။ နိုင်ငံတော်မူ ခေါ် ဦးနေဝင်းခန့်မြန်မာစာအဖွဲ့မူ ငါးပိ။ မြန်မာစာမူ ငပိ။ ငပိဆိုတာ ငါးကသာလုပ်တာ မဟုတ်ပါ။ စာကောင်းမှ စားကောင်းတ
ပါတော်မူခန်း (၁) သီပေါကို လာဖမ်းသွားတာ ရပ်ကြည့်နေကြတယ်ဆိုပြီး တချို့က ငြင်းချင်တယ်။ ပြည်သူက ဘုရင်ကိုမချစ်လို့ပေါ့တဲ့။ မချစ်ရင် ဘာလို့ပါတော်မူတုန်းက လမ်းဘေးမှာ ရပ်ကြည့်ပြီး ငိုနေကြတာတုံးတဲ့ ရေးကြတယ်။ သီပေါမင်းနဲ့ စုဖုရားလတ်ကို ရပ်ကြည့်နေခဲ့ကြတဲ့ မန္တလေးပရိသတ်လည်း အင်္ဂလိပ်ကို ကြိုက်ကြလို့တော့ မဟုတ်ပါ။ ဦးကောင်းကို အပြစ်တင်ကြတယ်။ အဲလိုလူတွေက ကင်းဝန်မင်းကြီးဆီ ကျောက်ပြင်နဲ့ ထဘီပို့လိုက်ဆိုတဲ့ စုဖုရားလတ်ကို ချီးမွမ်းကြတယ်။ ပါတော်မူခန်း (၂) မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာ ဘုရင်စုစုပေါင်း (၁၂ဝ) ပါးရှိတယ်။ ဘုရင်ရုပ်တွေထုထားတာကတော့ အနော်ရထာ၊ ဘုရင့်နောင်နဲ့ အလောင်းဘုရားလို့ ထင်တယ်။ တချို့က ပျူခေတ်က ရှေးဟောင်းအမွေတွေထက် ပျူဘုရင်မကိုသာ လွမ်းနေကြတယ်။ စလေငခွေး၊ နရသီဟပတေ့ တို့တတွေလည်း ကိုယ့်တိုင်းပြည်က ဘုရင်တွေလို့ သိထားရမယ်။ တောင်ငူအင်ပါယာမှာ သေသောက်ကြူးတဲ့ တပင်ရွှေထီးနဲ့ ဒီဘရစ်တိုနဲ့ မဟာမိတ်ပြုတဲ့ နတ်ရှင်နောင် အဖြစ်မှန်တွေလည်း သိရမယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကျောင်းသားဘဝကတည်းက သာလွန်မင်းကိုသဘောကျခဲ့တာ။ ရာဇာဘိသေက မခံသေးခင် ပြည်ထဲရေးကို အရင်ရှင်းတယ်။ စီးပွါးရေးပြန်လည်ထူထောင်အောင်လုပ်တယ်။ သန်ကောင်စာရင်း၊ အခွန်အတုတ်စစ
ပေတရာဆီလျှောက်ပါလို့ကို ပေတစ်ရာဆီလျှောက်ပါလို့ မရေးပါ။ အလွန်တရာကျေးဇူးတင်ပါသည်ကို အလွန်တစ်ရာကျေးဇူးတင်ပါသည်လို့ မရေးပါ။ အခုခေတ်မှာ နန်းတော်ရှေ့ဆရာတစ်တွေ အတော်ကိုများတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၃၀-၁၁-၂၀၁၈
အိုမီခရွန် ကိုဗစ်မျိုးကွဲသစ်ဟာ အရင်အမျိုးအစားတွေထက် ကူးစက်မြန်တာမို့ ဘာတွေသတိထားကြမလဲ
(အင်တာဗျူး) မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ တတိယလှိုင်းဒဏ်ထိ အလူးအလဲခံရပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကူးစက်ခံရပြီးပေမယ့် အမှတ်မရှိကြသလို တချို့က ပေါ့လျော့နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ခုတခါ ကိုဗစ်၁၉ရဲ့ ဗီဇပြောင်း Omicron ဆိုတာ တချို့နိုင်ငံတွေမှာ စတင်တွေ့ရှိနေတာကြောင့် နိုင်ငံတကာမှာ ဘယ်လိုတွေကာကွယ် ကုသနေကြသလဲဆိုတာသိနိုင်ဖို့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ပြီး ကျန်းမာရေးပညာပေးဆောင်းပါးတွေရေးသားနေတဲ့ ဒေါက်တာတင့်ဆွေကို VOM က ဆက်သွယ်မေးမြန်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ VOM။ ။ အခု နောက်ဆုံး၊ ပေါ်လာတဲ့ Omicron variant နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကူးစက်ခံရမှု လက္ခဏာတွေ၊ ကာကွယ်မှု ကုသမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာ ကျန်းမာရေး အသိုင်းအဝိုင်းက လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အခြေအနေလေးတွေ အကြောင်း ဆရာသိသလောက် ဝေမျှပေးပါဆရာ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကူးစက်မှု ဖြစ်မလာအောင်၊ ဖြစ်လာခဲ့ရင်ရော ဘယ်လို ပြုမူနေထိုင်ကြရမလဲ ဆိုတာလေးပါ ပြောပြပေးပါဆရာ။ Dr Tint Swe- အွန်မီခရွန်ဟာ ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ် မျိုးကွဲသစ်ဖြစ်တယ်။ ၂၆-၁၁-၂၀၂၁ နေ့က တောင်အာဖရိကမှာ စတွေ့ပြီး တရက်ထက်တရက်တိုး ပြီး တခြားနိုင်ငံတွေကိုပါ ရောက်နေပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်တဲ့သတင်း အခုထိတော့ မတွေ့သေးပါ။ ဟောင်ကောင်ကို ရောက်နေပြီဖ
သခင်ဘမောင် စုဆောင်းပြုစုသည်။ ဟံသာဝတီ ဦးဘရင်၏ အမှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်အတော်ကြာကပင် စာပေနှင့်ပတ်သက်၍ရေးသား ဆွေးနွေး ပြောဟောရာတို့တွင်၎င်း၊ လူမှုရေးကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ဖတ်ရှုရေးသားရာတို့တွင်၎င်း၊ တစုံတရာလိုနေသည်၊ ဟာနေသည်ဟု တွေးထင်မိသည်။ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်]ု သတိမမူခဲ့။ ယခု သခင်ဘမောင် စုဆောင်းပြုစုသည့် ဝံသာနုအရေးတော်ပုံသမိုင်း စာမူကိုတွေ့ရမှ တစုံတရာလိုနေခြင်း၊ ဟာနေခြင်းမှာ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် ဆိုသည်ကို သိမြင်လာရသည်။ ဟံသာဝတီ ဦးဘရင်က တစုံတရာကို တစုံတရာလို့သာ ရေးပါတယ်။ ကျန်သတ်ပုံတွေကလည်း အမှန်အတိုင်း ရေးတယ်။ ဥပမာ တစတစ။ ခုခေတ်လို လျှာရှည်တာတွေ၊ တစ်တာတွေ မပါ။ ဝံသာနုဆိုတာကလည်း ခုခေတ်လို မဟုတ်ကဟုတ်က ဝံသာနု မဟုတ်ပါ။ စာအုပ်ကို ၁၉၇၅ ခု ဇန်နဝါရီလမှာ ထုတ်ဝေတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
အမေရိကန်က ဂူအမ်ကျွန်းနဲ့ သြစတေးလျမှာ စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေ တည်ဆောက်မယ် ၂၉-၁၁-၂၀၂၁ နေ့ သတင်း။ တရုပ်ကို ဦးတည်တာဖြစ်ပါမယ်။ ဖေဖေါ်ဝါရီလမှာ သမတဂျိုးဘိုင်ဒင်က ခန့်လိုက်တဲ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး အော်စတင်ကို တာဝန်ပေးခဲ့ရာကနေ ဖြစ်လာတာ။ မတ်လမှာ global posture review ခေါ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အနေအထားဆန်းစစ်မှုလုပ်ခဲ့တယ်။ အစီအစဉ် အသေးစိတ်ကိုတော့ လျှို့ဝှက်ထားပါတယ်။ ဘိုင်ဒင်က အတည်ပြုပြီးပြီ။ အင်ဒို-ပစိဖိတ်ဒေသကို ဦးတည်ခြင်းဟာ ဘိုင်ဒင်လက်ထက်မှာ စတင်တယ်။ တရုပ်ကို ပစ်မှတ်ထားတယ်။ တရုပ်ကလည်း တိုင်ဝမ်ကို ပစ်မှတ်ထားပြီး လုပ်ဆောင်လာနေတယ်။ သြစတေးလျမှာ ဖိုက်တာဂျက်တွေနဲ့ ဗုံးကြဲလေယာဉ်တွေချထားမယ်။ မြေပြင်စစ်သည် လေ့ကျင့်ရေးစခန်းတွေ ရှိမယ်။ အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ တည်ဆောက်မယ်။ တခြားအရေးမပါတော့တဲ့ နေရာတွေက တပ်သားတွေနဲ့ ကရိယာတွေ ရွှေ့လာမယ်။ တရုပ်ကလည်း ရုရှားနဲ့ စစ်ရေးပူးပေါင်းတာတွေ တိုးလုပ်နေတယ်။ ပိုကောင်းတဲ့လက်နက်သစ်တွေ စမ်းတယ်။ အမေရိကန်ဟာ ဥရောပမှာလည်း အဆင်သင့်အနေအထားအဆင့် ပြန်လုပ်နေတယ်။ အင်ဒိုပစိဖိတ်မှာ ဆက်လုပ်လာတာဖြစ်တယ်။ မကြာသေးခင်က တရုပ်ကကန့်ကွက်တဲ့ကြားကနေ အမေရိကန် အမတ်တွေ တိုင်ဝမ်ကိုသွားကြတယ်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာလည်း ယူအက်
၂၀၂၁ ဒီဇင်္ဘာလဟာ မြန်မာပြက္ခဒိန်အရ ၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆုတ် (၁၃) ကနေ နတ်တော်လဆုတ် (၁၃) ရက်နေ့အထိ ကျရောက်တယ်။ ဒီဇင်္ဘာဆိုတာ လက်တင်လို Decem ကနေလာတာဖြစ်တယ်။ အဓိပ္ပါယ်က (၁ဝ)။ စပေါ်တဲ့ပြက္ခဒိန်မှာ (၁ဝ) လသာပါလို့ ဖြစ်တယ်။ ဒီဇင်္ဘာ နှစ်ပါတ်လည်နေ့များနဲ့ ဆောင်ပုဒ်များ • December 1 = ကမ္ဘာ့ World AIDS Day နေ့။ ပေါ်တူကီ လွတ်လပ်ရေးပြန်ရခြင်းနေ့၊ ရူမေးနီးယား ပြည်ထောင်စုနေ့၊ EataRed Apple Day ပန်းသီးအနီတလုံးစားပါ။ • December2= ယူအေအီးနိုင်ငံ အမျိုးသားနေ့။ • December3= International Day of People with Disability နိုင်ငံတကာ မသန်စွမ်းသူများနေ့။ • December4= World Wildlife Conservation Day ကမ္ဘာ့ တောရိုင်း တိရိစ္ဆာန်များ ထိန်းသိမ်းရေးနေ့။ အိန္ဒိယ ရေတပ်မတော်နေ့။ • December5= Volunteer Day စေတနာ့ဝန်ထမ်းနေ့။ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘုရင့်မွေးနေ့ (ဖခင်နေ့)။ • December6= ဖင်လန်နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးနေ့။ စပိန်နိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေနေ့။ • December7= Pearl Harbor Day အမေရိကန် ပုလဲဆိပ်ကမ်းနေ့။ • December9= Christmas Card Day ခရစ္စမတ်ကပ်နေ့။ • December 8 = ပနားမားနိုင်ငံ မိခင်နေ့။ ရိုမ
Bago (Pegu) ပဲခူး (ဗဂိုး)
မိတ်ဆွေ ဆရာဝန်တဦးက ငါ့လှေငါထိုး ပခိုးရောက်ရောက်လို့ ရေးထားလို့ အားနာစရာ မလိုတာမို့ ပြင်ဦးမယ်။ ၁၅-၆-၂၀၁၈ နေ့က ပဲခူး (ဗဂိုး) မြို့ကို နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ သားသမီးမြေးတစု ကောင်းမှု လို့ မှန်ကန်အောင် ရေးထိုးထားတယ်။ တ စသတ်မပါ။ မှု မှာ အောက်မြစ်ပို မပါ။ သတ်ပုံမှန်တဲ့ ပဲခူးသူတွေ ဗဂိုးသားတွေ နေကောင်းကြပါစေ။ ပုစွန်ချဉ် ဝယ်ခဲ့တယ်။ ကောင်းတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
၁။ တရံရောအခါ မိဘုရားခင်ဦးနှင့် အပြောအဟောရှိပြန်သည်ဟူ၍ မောင်းမတို့ လျှောက်သောကြောင့် ကျေးစည်းစိမ်ကိုရုပ်၍ အောက်တလသို့ ပို့ပြန်၏။ ၂။ နရသီဟပတေ့ မင်းကြီးလည်း ငါကား ဂူထွတ်နှင့် တူ၏။ ရာဇသင်္ကြံကား ငြမ်းနှင့်တူ၏။ ဂူထွတ် အထက်သို့ ရောက်သကဲ့သို့ ငါ မင်းအဖြစ်သို့ ရောက်ပြီ။ ငြမ်းနှင့်တူသော ရာဇသင်္ကြံကိုဖျက်မှ ဂူထွတ်နှင့်တူသော ငါ တင့်တယ်သည်။ စည်းစိမ် ဆင်မြင်း သင်းပင်းခြွေရံတို့ကို သိမ်း၍တလမြို့သို့ ပို့လေဟု မိန့်တော်မူ၏။ (ဦးကုလား မဟာရာဇဝင်ကြီး) ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
၁၉၉၀ ဂန္ဒီအစည်းအဝေးပြီးကတည်းက ပါတီရုံးချုပ်ကို ၃၀-၄-၂၀၁၈ နေ့က ပြန်ရောက်ပါတယ်။ ငယ်သူငယ်ချင်း မုံရွာအောင်ရှင်နဲ့တွေ့ပြီး ၁၉၉၀ ကတည်းကအတူလုပ်ကိုင်ခဲ့သူ ဦးဟန်သာမြင့်စကားပြောပြီး ရုံးချုပ်လူတွေကို နှုတ်ဆက်ရတယ်။ နောက်တကြိမ်ပြန်ရောက်တော့မည် မဟုတ်။ အဲလို မဖြစ်နိုင်တော့တာမျိုးတွေ လူတိုင်းမှာ ရှိကြတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
အိုမီခရွန် ကိုဗစ်မျိုးကွဲသစ် သတင်းတွေနဲ့အတူ အိုမာခယမ် ကို သတိရမိတယ်။ ကဗျာချစ်သူသို့ စကားတခွန်း ပေါင်မုန့် တယှက်၊ ဝိုင်တခွက်၊ သစ်ရိပ်သာယာ၊ တေးကဗျာ ဆိုတဲ့ စာဆိုကျော် အိုမာခယမ်ရဲ့ ကဗျာတေးတစလိုပါပဲ။ ဆရာတင်မိုးက ပုဂံကျောင်းကခေါင်းလောင်းသံစာအုပ်မှာ ရေးထားတာ။ အခုခေတ်မှာ မျိုမကျတဲ့ထမင်းနဲ့ မျိုမရတဲ့ဟင်းရည်ကို စားသောက်ရသလို မြန်မာစာသတ်ပုံကို ပြင်ရေးကြတယ်။ အိုမာခရမ် Omar Khayyam (1048 – 1131) ပါရှန်း ကဗျာဆရာ၊ သချင်္ာဆရာ၊ နက္ခတ်ဗေဒပညာရှင်၊ ဖီလော်ဆောဖါ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ငါးခုံးမတကောင်ကြောင့် တလှေလုံးပုပ် ရှင်ဘုရင်တခါထွက် ပဲကြီးတလှေချက် ကျော်တော့လှေသူကြီး ညားတော့လှေထိုးသား တောင်ကြီးဖဝါးအောက် လှိုင်းကြီးလှေအောက် လှေနံ နှစ်ဖက်နင်း လှေအဆင်း မြင်းအတက် တလှေတည်းစီး တခရီးတည်းသွား ငါ့လှေငါထိုး ပဲခူးရောက်ရောက် လှေနံဓားထစ် ၁၉၉၄- ၁၉၉၅ လောက်က တလှေတည်းစီး ခရီးတူသွားသူတွေနဲ့ သောင်ရင်းမြစ်မှာ လှေထဲကရေ ခပ်ထုတ်ရဖူးတယ်။ ဒီစာရေးပြီးနောက် နှစ် ၁၅ လောက်ကြာတော့ ကျွန်တော်တို့တတွေ ရေထဲကတက်လာကြပြီး၊ မတူလှတဲ့ခရီး ဆက်သွားနေကြတယ်။ သောင်ရင်းမြစ်ရေ ဆက်စီးနေတယ်။ အခုတော့ သောင်းရင်းမြစ်ထဲမှာ လူသစ်တွေ စုန်ချီ ဆန်ချီ သွားလာနေကြရပြန်ပါပြီ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
၁။ အင်းလျားအဆောင်သူ လူထုဒေါ်အမာ ၁၀၆ နှစ်ပြည့် ယနေ့ဟာ စာပေနဲ့ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာ လူသိများတဲ့ လူထုဒေါ်အမာရဲ့ ၁၀၆ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ လူထုဒေါ်အမာကို အဖဦးထင်၊ အမိဒေါ်စုတို့က ၁၉၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ မန္တလေးဇာတိ ဒေါ်အမာဟာ မန္တလေး ဥပစာ ကောလိပ်မှာ ၁၉၃၃ ကနေ ၁၉၃၅ အထိပညာဆည်းပူးခဲ့ပြီး ၁၉၃၆ နှစ်မှာတော့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ ပညာဆည်းပူးစဉ် အင်းလျားဆောင်မှာ နေထိုင်ခဲ့ပြီး အင်းလျားဆောင် သဟာယနဲ့အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ အင်းလျားအဆောင်သူ လူထုဒေါ်အမာဟာ ၁၉၃၆ ဒုတိယ ကျောင်းသားသပိတ်ကြီးမှာ တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ပြီး သပိတ်မှောက် သီချင်းကိုလည်း ရေးစပ်ခဲ့ပါတယ်။ အိုးဝေမဂ္ဂဇင်း၊ ကြီးပွားရေးမဂ္ဂဇင်း၊ ဘားမားဂျာနယ်တို့မှာလည်း ဝတ္ထု၊ ဆောင်းပါးတွေ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၃၉ ခုနှစ်မှာ လူထုဦးလှနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီး သားသမီး ၅ ဦးထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၄၅ လူထုဂျာနယ်ကို စတင်ထုတ်ဝေတဲ့အခါ လက်ထောက်အယ်ဒီတာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၊ ၁၉၄၆ လူထုသတင်းစာကိုထုတ်ဝေတဲ့အခါမှာ အယ်ဒီတာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၄၉ မှာ လူထုသတင်းစာနဲ့ ကြီးပွားရေး ပုံနှိပ်စက်များ
My Blogs ဘလော့ ဒုက္ခ
ဘလော့ကို ပေါ်စကတည်းက ရေးတယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလ ထက်စောတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အသစ်ရေးတာ အခါခါ။ အချိန်အတော်ကုန်တယ်။ အီးမေးလ်ကတမျိုး။ ဘလော့စည်းကမ်းကတမျိုး။ ဖေါင့်ကတမျိုး။ ဖတ်မရဘူးပြောတိုင်း ပြန်ပြန်ဖြေနေရတာလည်း အကြိမ်မနည်းတော့ပါ။ ကနေ့တခု ထပ်လာပြန်တယ်။ (၁) ၁၂-၂-၂ဝ၁၅ ၁၃-၁ဝ-၂ဝ၁၄ နေ့ကစပြီးလုပ်ထားတဲ့ ဘလော့ခ်အသစ် Dr. Tint Swe's Writings ကို စုစုပေါင်းကြည့်ရှုတဲ့ အကြိမ်ပေါင်း Pageviews all time history 90,522 (ကိုးသောင်းကျော်)။ (၂) ၁၈-၂-၂၀၁၅ My Blogs ဘလော့ ၉ ခုရှိတယ်။ (၃) ၅-၄-၂ဝ၁၆ ဘလော့ ၁၅ ခုနဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ် ၄ ခုရှိခဲ့တယ်။ On Blogger since May 2008 Profile views – 54798 (၅ သိန်းကျော်) 1. Medical Writings ဆေးပညာစာများ 2. Yamuna Medical Clinic ယမုန်နာ ဆေးခန်း 3. ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲ 4. ညွန့်ပေါင်းသတင်းလွှာ 5. My Presentations 6. My writings 7. The Pearl ပုလဲသွယ် 8. Yamuna Online Clinic ယမုန်နာ ဆေးခန်း 9. Political Page ပုလဲသွယ် နိုင်ငံရေး စာမျက်နှာ 10. Medical Writings ဆေးပညာစာများ 11. Medical writings New Blog 12. NCGUB 13. Medical Blog 14. ပြည်ထောင်စုရေးရာ 15. My Life asaDoctor ဆရာဝန်ဘဝ စ
မီးဒုတ်သတင်းစာ ကြော်ငြာတခု ၁၉၅၉ အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက် ကြို့ပင်ကောက်နယ် စက်ပိုင်သူဌေး တည်မြဲ တရားပွဲသတင်း တည်မြဲဆိုတာ ဖဆပလ နှစ်ခြမ်းကွဲတော့ ဦးဘဆွေ + ဦးကျော်ငြိမ်းတို့ရဲ့ပါတီ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဗိုလ်နေဝင်းက သူတို့ပါတီဘက်ကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ဘက်လိုက်ခဲ့တော့ ရလဒ်မှာ ခွက်ခွက်လန်အောင် ရှုံးတယ်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာတော့ စစ်တပ်က ဘက်လိုက်တဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ခွက်ခွက်လန်အောင်ရှုံးတယ်။ စစ်တပ်ကို အတိုက်အခံပြုသူတွေရဲ့နေအိမ်တွေ၊ ဘုရားကျောင်းတွေကို မီးရှို့ကြတယ်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ သတ်ပုံမှာတော့ တရားကို တစ်ရားလို့ ရေးနေသူတွေ ပေါ်ပေါက်လာတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
၁။ ယူကေနိုင်ငံမှာ အသက် ၁၈ နှစ်အထက်တိုင်းကို ဘူစတာဒို့စ် ခေါ် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး တတိယအလုံး ထိုးဘို့ တိုက်တွန်းလိုက်တယ်။ ၂။ ယူအက်စ်အေမှ သမတ ဘိုင်ဒင်ကလည်း ဘူစထာထိုးကြပါ။ စောင့်မနေပါနဲ့တဲ့။ ဒါ့ပြင် လူအများ အတူရှိနေတဲ့ အခန်းတွင်းထဲမှာပါ နှာခေါင်းစည်း တပ်ကြပါတဲ့။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
How to quit Alcohol အရက်ဘေးက ဝေးကြပါစေ
၁။ ဆရာ ကျွန်တော်အသက် ၃၅နှစ်ပါ၊ ညနေတိုင်း တောအရက်တပိုင် းအမြဲတမ်းသောက်လာတာ ၁ဝနှစ်ကျော်ပါပြီ၊ အခု ရင်ခေါင်းအောင့်ပြီး ရင်ပူတာ ၁လနီးပါးရှိပီဆရာ၊ ညတရေးနိူးမှဖြစ်ပြီး နံနက်ကျရင် သက်သာသွားပါတယ်၊ ကွမ်းလည်း စားပါတယ်၊ လမ်းညွုန်ချက်သောက်ရမယ့်ဆေးလေးသိပါရစေခင့်ဗျာ။ ၂။ ဆရာမင်္ဂလာပါရှင့် ကျွန်မအမျို းသားက အရက်အရမ်းသောက်ပါတယ်ဆရာ။ ဒီရက်ပိုင်းပိုစိုးပါတယ်ရှင့်။ (ဆိုးပါတယ်လို့ ရေးရတယ်)။ အဲ့တာ အရက်ပြတ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရှင့်။ သူအသက်က ၃၆ နှစ်ပါရှင့်။ ၃။ ကျမအသက်က ၃၃ နှစ်ပါ။ ကျမအမျိုးသားက၂၈ ပါ။ အမျိုးသားကို အရက်ပြတ်စေချင်လို့ပါဆရာ။ အရက်သောက်တာ ၃ နှစ်လောက်တေ့ာရှိပါပြီရှင့်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပျော်သောက်ရာက ခုမသောက်ပဲ မနေနိုင်အောင် ဖြစ်နေတာပါ။ အမျိုးသားကကျိုးစားပြီးလျော့သောက်ကြည့်ပါတယ်။ မနက်တပိုင်းလောက် မသောက်ပဲနေတာနဲ့ လေတွေတက်တယ် ပျို့ပြီးအန်ပါတယ်။ လုံးဝနေလို့မကောင်းဘူးရှင့်။ အရက်ဖြတ်ဆေး ရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်ရှင့်။ အရမ်းလဲခံရတယ်လို့ကြားဘူးတယ်။ အမျိုးသားက ဟိုတုန်းကဘီယာလောက်ပဲသောက်တာ ခုမသောက်ရမနေနိုင်ဖြစ်တာ ၅လလောက်တော့ရှိပါပြီဆရာ။ အရက်ပြတ်နိုင်အောင် ဘယ်လိုဆေးနည်းများရှိမလဲ ညွှန်ကြားပေးပါဆရာ။ သူကအလုပ်လုပ်တာဆိုတ